Tuesday June 12, 2018 - 21:02:37 in Wararka
Carruurtan oo tiradoodu gaareysay 76 carruur ah ayaa laga soo kala xulay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe iyadoo si gaar ah loo soo xulay carruurta agoonta ah ee qoysaskoodu ay liitaan.
Agoonta maanta loo qaybiyey dhar ay ku ciidaan oo isugu jiray gabdho iyo wiilal ayaa wajiyadooda waxaa ka muuqatay farxad iyo reynreyn, waxayna ehelada carruurta ka mahadceliyeen deeqda dharka ah ee la soo gaarsiiyay, iyagoo ka codsaday dadka hantida Alle siiyay inay kaalmeeyaan agoonta iyo dadka danyarta ah.
Guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo goobjoog ka ahaa qeybinta dharkan ciidda ah ayaa uga mahadceliyay xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji sida uu marwalba ugu heelan yahay inuu kaalmeeyo carruurta agoonta ah waxana uu ku tilmaamay tallaabada uu qaaday Xildhibaan Xasan Maxamed Cali inay tahay mid ku dayasho leh.
Sidoo kale munaasabadan oo maanta ka dhacday degmada Balcad ayaa waxaa toban ka mid ah carruurta agoonta ah ee ku nool degmadaas ugu deeqay dhar ay ku ciidaan Cumar Maxamed Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Balcad.
Xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji Qoobey oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabelle ahna nin beeralay ah caan ka ah degmada Balcad ayaa sheegay in sababta uu ugu iibiyay carruurtan dharka ciida inay tahay in uu Alle ajar ka siiyo iyo weliba in uu bulshada tuso in ay dhexdooda iska kaashan karaan oo kan wax haysta kan kale uu kaalmeyn karo.
Ma aha markii ugu horeysay ee uu xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji Qoobey uu u iibiyo dhar ay ku ciidaan carruur agoon ah, ciidii hore ayuu sidan oo kale Mudane Xasan Qoobey u iibiyay carruur agoon ah dhar ay ku ciidaan.